နှစ်သစ်အတွက် သီချင်းလက်ဆောင် ~ White Angel
3:18 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 12 comments
၂၀၀၉ နှစ်ဆုံးကနေ ၂၀၁၀နှစ်စကို ကူးပြောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာ မမိုးငွေ့ Tag ထားတဲ့ “နှစ်သစ်အတွက်...လက်ဆောင်”ဆိုတဲ့ post လေးကိုရေးခွင့်ရလိုက်တယ်။
သီချင်းလေးရဲ့စာသားအရဆိုရင်တော့ ကျမက မောင့်ကို သီချင်းဆိုပြရမှာလေ...၊ ဒါပေမယ့် ကျမအိပ်တဲ့အခါတိုင်း မောင်က လေလှိုင်းထဲကနေ သီချင်းလေးတွေဆိုပြီး ကျမကို သိပ်တတ်တယ်။ ကျမ အိပ်ပျော်လောက်တဲ့အချိန်ကျမှ လေလှိုင်းထဲကနေ ကျမရဲ့နှဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းပြီး သီချင်းဆိုရပ်ကာ ကျမအနားကနေ ညင်သာစွာထွက်ခွာသွားတတ်နော်...။
လေလှိုင်းထဲကဆိုပေမယ့် ကျမအတွက်တော့ ကျမရဲ့ဘေးမှာ မောင်ရှိနေသလိုပါပဲ..။ ကျမပေါ်ကိုကျရောက်မယ့် ချမ်းအေးလှတဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့အအေးဒါဏ်တွေကိုလည်း မောင့်ရဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ လွှမ်းခြုံနွေးထွေးစေခဲ့တဲ့ မောင့်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့အကြင်နာတွေကို ကျမ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဥပက္ခာမပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။
ထွေးပွေ့ထားတဲ့ နင့်ရဲ့ စာနာနားလည်မှု
လုံခြုံစွာ အရိပ်ခိုနိုင်ခဲ့ပြီလေ ...”
xxxသံစဉ်တွေပြောင်းလဲသွားလည်းxxxဘယ်အခါ မပြောင်းလဲxxxမင်း အကြောင်းပါအချစ်ရယ်xxxစကားလုံးများxxxဆန်းသစ်သွားလည်းxxxမြင်ယောင်အတွေးထဲxxxမင်း...တစ်ယောက်ထဲxxx
နင်ဟာ ငါ့ကဗျာထဲက ကာရန်လေးတွေပဲပေါ့....
နင်ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာထဲက မင်းသမီးလေးဟာ ငါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကျမကတော့ မောင့်ရဲ့ရင်ထဲက “အဖြူရောင်နတ်သမီး”လေးပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်....။
ချစ်တတ်သူ...မောင် နဲ့ အချစ်ငတ်သူ....ကျမ တို့ရဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူဘဝလေးကို ထွေးပိုက်ရင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းများနဲ့အတူ ၂၀၁၀ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုရင်း ကျမ အပျော်တန်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “သီချင်းလက်ဆောင်” သီချင်းလေးကို “မောင့်အတွက်...နှစ်သစ်လက်ဆောင်” အဖြစ် ပို့ပေးလိုက်တယ်နော်...။
ကျမရဲ့ဘေးမှာ မောင်မရှိပေမယ့် မောင့်ရဲ့အချစ်တွေရှိနေတယ်....
*မောင်က အမဲရောင် ဖြစ်ပြီး
မီးခိုးရောင်ဘဝ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူကြမယ်။
*တကယ်လို့ မောင်က အနီရောင်ဖြစ်ပြီး
အဲဒီနှစ်ရောင် ပေါင်းစပ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
အခု ကျရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့...၂၀၁၀ မှာ မောင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ ...
သစ္စာစောင့်သိခြင်း...ဆိုတဲ့ အရောင်တွေနဲ့ “၂၀၁၀” မှာ မောင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့
နှစ်သစ်မှာ မောင် တယောက် လိုအင်ဆန္ဒတွေ တလုံးတဝကြီး ပြည့်ဝပါစေလို့....ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်....
ချစ်သူအတွက် သီချင်းလက်ဆောင်လေးကို ခံစားသွားတယ်ဗျားးးး
(နတ်သာမီးတစ်ယောက်ကတော့ သရုပ်ဆောင်လည်း... တယ်မခေဘူးကိုးးးးး)
ချမ်းချမ်းသီချင်းဆိုတာ... ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဗျ...။ အသံအားကောင်းတယ်လေ...(အရိုးထဲက ထွက်တဲ့ အသံမို့လားမသိဘူး.... ဟီးးးးးးးး)
သီချင်းနားထောင်ရင်း အဖြူရောင်နတ်သမီးကို ပါကြည့်သွားလိုက်တယ်။
သူများတွေများ ချစ်တတ်လိုက်ကြတာနော်း)
ပျော်ရွှင်စရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို လာပြီး အားကျသွားပါတယ်.. ကြည်နူးစရာလေးတွေပါ.. ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေ
အဲ .. လူချင်းနီးသွားအောင် လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဘဲ :) :) :P
နှစ်သက်မိတဲ့စာသားလေးတွေပါ အမရေ နတ်သမီးလေးက တော်တော်ချစ်တတ်တာဘဲဗျာ . . .
အလို အချစ်မျိုးကို လေးစားသလို အားလည်းကျမိ
ပါတယ်ဗျာ . . . ချစ်သူနဲ့ လည်း ဘ၀တစ်လျောက်လုံး
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာလက်တွဲပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ 
မိသားစု ဘ၀လေး ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်း
တောင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျ . . . ခင်မင်လျက်
ဒီနတ်သားတော့..အမဲေ၇ာင်နဲ့ အနီရောင် အမြန်ချယ်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်...ဒါမှမီးခိုးရောင်နဲ့ ပန်းရောင် မြန်မြန်ဖြစ်မှာ....
မောင်ဘကြိုင်ကတော့ လက်ခံပြီး နားထောင်တွားတယ်ဂျ
နတ်သမီးလေးရဲ့မောင် နဲ့ 2010 မှာတင်မဟုတ်ဘဲ.. ဘ၀ဆက်တိုင်း ကြည်နူးခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ယုံကြည်နားလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင်မြင်ချောမွေ့တဲ့ ဘ၀ခရီးကို ဆေးရောင်လှလှလေးတွေ တူနှစ်ကိုယ်ခြယ်သ နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ချွေလိုက်ပါတယ် ကွယ်..
မမ မောင်တော့ မသိဘူး..
မမက အရမ်း Romantic ဆန်တယ်နော်..
အညင်ကပ်တယ် .. ။ မောင်တစ်ယောက် နှစ်သစ်မှာ လိုအင်ဆန္ဒတွေ တစ်လုံးလုံး တ၀ကြီး သောက် .. အဲ ပြည့်ဝပါစေ ...။
ကျနော် တို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းမပေးတော့ဘူးလားဗျာ
ဒီရက်ပိုင်းအလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေလို့ နောက်မှလာရေးဖြစ်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်